Sierra Leone inova nhengo nyowani nyowani yekuICTP
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Sierra Leone inova nhengo nyowani nyowani yekuICTP
Dai 4, 2012
Sangano reInternational Council of Tourism Partners (ICTP) mubatanidzwa mutsva wekufamba uye wekushanya mubatanidzwa wenzvimbo dzepasirese dzakazvipira kuita basa remhando yepamusoro uye kukura kwegirinhi. Iyo ICTP logo inomiririra simba mukubatana (iro bhuru) renharaunda diki diki (mitsara) yakazvipira kugungwa regungwa (bhuruu) nepasi (girini).
ICTP inobatanidza nharaunda nevabatanidzi vavo kuti vagovane mikana yemhando yepamusoro uye yakasvibira inosanganisira maturusi nezviwanikwa, kuwana mari, dzidzo, uye rutsigiro rwekutengesa. ICTP inotsigira kukura kwekufamba nendege, kwakarongedzwa mafambiro, uye mutero wakaringana.
Kuti uwane rumwe ruzivo, enda kune: www.tourismpartners.org.
Namibia inotarisira kupinda mumusika weArabia wekushanya
Budget inotakura bmibaby yekuvhara gare gare gore rino